Mazino Anodyara Cape Town | Optismile Kuisa Nyanzvi
navanachiremba vedu vemuCape Town mazino maitiro vanogona kupa imwe nzira yekusingaperi kumazino emazino asina kugadzikana kana mazino asipo
Tumira WhatsApp izvozvi
Tora Kutenda Kwako Kudzoka NeMazino Anodyara
Hapana chikonzero chekunzwa kusanzwisisika paruzhinji, uchinyara nekuti kunyemwerera kwako kunoita kunge kwakasiyana, kana kunetsekana kuti kushaya meno kuchakutadzisa kunakidzwa nekudyidzana. Kana pamwe kuti mazino ako anobviswa kana mazino ekutsigira mazino anozosunungura kana kudonha paunotaura, kudya kana kuseka. Mazino akadzoreredzwa nemazino anodyara mazino ayo anokurega iwe utungamire hupenyu hwako uine chivimbo. Anodyara achasangana zvakasikwa nemeno ako asara, pasina kuvakuvadza. Muchokwadi, kuiswa kwemazino kunogona kunyange kuchengetedza iripedyo pfupa uye chingamu tishu. Nekugara uchigadziriswa, mazino anodyara anogona kugara kweupenyu hwese, zvichipa zororo kugamuchirwa kubva kuzviratidzo zvinoonekwa zvekukwegura izvo kukurumidza kurasikirwa kwezino kunogona kukurumidza.
Nehunyanzvi, kuiswa kwemazino idiki asi yakasimba kwazvo posvo yakagadzirwa kubva kune biocompatible simbi kana ceramics. Pasi pemushonga wepano, inoiswa mupfupa reshaya panzvimbo yemudzi wezino usipo uye inoita sekutsigira zino. Dental implant Therapy ndeye yanhasi-refu, mamiriro ehunyanzvi ekudzosera matekiniki ayo anogona kuvhara zvese zvinoratidza. Yakave yakaedzwa nesainzi uye ikashandiswa mumakumi matatu emakore apfuura nevarapi vemazino vanokwanisa uye vanovhiya pasirese.
Anodyara Vs Tsika Dentures
Kune vamwe vanhu, mabhiriji akajairwa uye mazino ekugezesa haangogadzike kana kutokwanisika, nekuda kwenzvimbo dzinorwadza, makoronga akashata kana kumonana. Chinhu chakanakira kudyara ndechekuti hapana mazino ari padhuze anoda kugadzirirwa kana pasi pasi kuti ubate rutsva / mazino ako matsva panzvimbo.
Meno uye mazambuko akaiswa kune anodyara haazotsvedza kana kuchinja mumuromo mako. Kukodzera kwakachengetedzeka uku kunobatsira mazino uye mazambuko pamwe chete nekorona dzakaiswa pamusoro pemamwe mapurasitiki kuti dzinzwe dzakasikwa kupfuura mazambuko akajairwa.
Nakidzwa neHupenyu usinganetseke Nezve Mazino Ako
Zvakanakira Mazino Anodyara
Yakanakisa Yekutsiva Sarudzo
Yakasimba uye yakagadzikana, kudyara kwemazino kunodzosera zino rakarasika kuitira kuti riite, rinzwe, rinokwana uye rishande sezino rechisikigo. Ndicho chinotevera chakanakisa chinhu kune hutano, mazino echisikigo.
Zviri Nyore Kutaura Na
Kugadziridza kumazino ekubvisa anogona kureva kunetsekana kududza mazwi ezuva nezuva. Hazvina kudaro nemazino anodyara, anoshanda semazino echisikigo.
Chengetedza Chiso Chako Chimiro
Kuiswa kwemazino kunovimbisa kuti hapana shaya inodzikira iyo inobatsira kuchengetedza yako yechisikigo chimiro chechimiro uye kunyemwerera. Chiso chisina mazino chinogona kutsvedza, chichiita kunge chakanyura uye chakasuruvara.
Idya Chikafu Chaunofarira
Edza uye unakirwe nechikafu chaunoda pasina kuzeza. Unogona kuruma zvakasikwa, kudya chero chinhu chaunoda uye, kusiyana nemazino ekubvisa ayo anogona kunzwa kusanzwisisika, unogona kunzwa kuravira kwakazara kwechikafu chaunodya.
Cavities haigone kuitika mune yekudyara-yakadzoreredzwa korona, kana kutsiva zino. Nekudaro, iwe uchave uchiri kuda kushanyira chiremba wemazino nguva dzose pamwe nekuichenesa uye kuitarisira pamwe nemazino ako, zvakafanana sezvaungaita dai raive zino rechisikigo.
Chengeta Mazino Ari Panzvimbo
Mazino ekugezesa anogona kutsvedza kana uchidya, kutaura, kunyemwerera, kuseka, kutsvoda, kushama kana kukosora. Mazino anodyara akaiswa munzvimbo uye fuse zvakasikwa nejaya rako, zvichireva kuti meno ako ekutsiva haazofambe, baya kana kuchinja.
Chengetedza Hutano Bone
Kusiya nzvimbo dzisina chinhu mumuromo mako mushure mekurasa rimwe kana mamwe mazino kunogona kutungamira kune zvimwe zvehutano nyaya. Kana isiri kushandiswa kutsigira zino rechisikigo, shaya inodzikira, ichipera simba nekusimba. Mazino anodyara ndiwo ega sarudzo yekudzosa mazino inochengetedza uye inosimudzira echisikigo mapfupa kukura.
Yakareba-Nguva Solution, Yakavakirwa Kugara
Chinyakare, mazino-anotsigirwa mazino mabhiriji kazhinji anogara anopfuura makore gumi kana akachengetedzwa zvakanaka, uye pane imwe nguva, angangoda kutsiviwa. Nepo kudyara kwemazino kungangoda kugadziridzwa kwenguva nenguva, vanogona kutora hupenyu hwese kana vakaiswa zvakanaka nekuchengetwa.
Yakavimbika uye Inotarisirwa
Mishonga yekuisa mazino ine chinyorwa chekuvimbika, chenguva refu mhedzisiro inobudirira uye inowanzoonekwa seinofungidzirwa kupfuura mamwe marapirwo. Mazino anodyara anogona kushandiswa kutsiva rimwe zino, akati wandei mazino, kana ese mazino. Chinangwa chekutsiva kwemazino ndechekudzorera basa pamwe neaesthetics.
Dzivirira Mazino Ako Ane Utano
Kuisa zambuko rinotsigirwa nezino kunoda kukuya mazino kune rimwe kana mativi ese ezino risipo kana mazino - nokudaro zvichikuvadza meno akagwinya kudzorera iwo asipo. Mazino akagadziridzwa ane hutano akasungirirwa, uye kutsigira, iro bhiriji Mazino anodyara anoenda mushaya, munzvimbo iyo yako yakashaikwa muzino mudzi, isina kukanganisa meno ane hutano. Dzinobatsirawo kudzivirira hutano, mazino ari padyo kubva mukuchinja sezvaizoita kana nzvimbo isina chinhu yasara kwenguva yakareba.
Haisi Chokwadi Kana Zvirimwa Zvakakukodzera Iwe?
Nemazino anodyara kesi imwe neimwe yakasiyana, zvisinei, kazhinji, kuti ive yakakodzera iwe unofanirwa:
Iva nechiyero chakaringana chemapfupa emapfupa kuti ugone kuisa mukati mejaya rako. Kana zvisiri, izvi zvinogona kuvakwazve neako periodontist
Iva wakasununguka kubva kuzvirwere zvenguva, izvo zvinonyanya kurapwa neanoporaontist
Iva asiri-wekuputa (iwe uchafanirwa kurega kusvuta panguva yekurapa maitiro padiki padiki). Kusvuta kunogona kukanganisa budiriro yenguva refu yekudyara kwako
Ita kuti mazino ako asingadzoreke abviswe neako periodontist mukugadzirira kwekukurumidza kana kwekupedzisira kudyara kudzoreredzwa
Kuiswa kwemazino chiitiko chekuvhiya chinoiswa mushaya uye chinobvumidzwa kusanganisa nefupa pamusoro pehurefu hwemwedzi mishoma. Iwo mapango esimbi kana mafuremu ayo akaiswa mukati mekuvhiya mupfupa repasi pezino rako. Pane imwe nzvimbo, vanotibvumira kuisa mazino ekutsiva pavari.
KuOptiSmile tinoshandisa zvigadzirwa zvekombuta zvemazino zvepamusoro uye nekutenda kune edu masisitimu eCEREC, anogona kupa kurapwa kurapwa muchikamu chimwe chete. Iyi tekinoroji inotibvumidzawo isu kupa varwere mainlays, onlays, korona uye veneers musarudzo imwe chete. Yedu CEREC CAD masisitimu anogona kuburitsa kudzoreredzwa nekombuta-zino rako muzasi kwemaawa maviri.
Nekufamba kwenguva, tekinoroji nesainzi zvakafambira mberi kuvandudza zvakanyanya mhedzisiro yekuiswa kwemazino kuiswa. Kuiswa kwemazino kunogona kugara kwehupenyu hwese, kuchipa zororo rinogamuchirwa kubva kuzviratidzo zvinoonekwa zvekukwegura izvo kukurumidza kurasikirwa mazino kunogona kukurumidza.
Ivo vanozo sanganisa zvakasikwa nemeno ako asara, pasina kuvakuvadza. Muchokwadi, kuiswa kwemazino kunogona kuchengetedza iripedyo pfupa uye chingamu zvinyama izvo zvinowanzo kusakara pasi neakajairwa mazino ekuvezwa uye bhurukwa. Mazino anodyara anogona kupa varwere vedu kuzvivimba kunounzwa kunyemwerera kwakazara.
Ndedzipi sarudzo dzaunogona kuwana?
Kune matatu akasiyana mhando yekuisa mazino. Zvichienderana nemamiriro ako ega, rako reSmile rinotenderwa mazino nyanzvi richasarudza kuti ndeupi mhando wakanakira iwe. Iyo yekumesa mazino muCape Town mutengo inosarudzwa nezvinhu zvakaita senge mhando yemazino anodyara anoshandiswa.
Cylinder kana screw-yakaumbwa, endosseous implants inogadzirwa nesimbi, zvedongo kana zvedongo-yakavharwa simbi uye inoiswa mukati meshaya.
Subperiosteal implants ine simbi simbi inonamira pamusoro peiyo shaya asi pasi pechinyama.
Midziyo yeTransosteal ingava pini yesimbi kana furemu yakaita se-u inopfuura nepane shaya uye munyama wegum mumuromo.
Nei Uchifanira Kuiswa Mazino?
Mazino Anodyara Anopa Akawanda Makomborero Pamusoro Petsika Mafomu Ekumisikidza Dzino:
Ivo Vanogarisa kwenguva yakareba kupfuura mabhiriji kana mazino ekugezera
Kuiswa kunodzivirira kurasikirwa kwepfupa kwakabatana nemazino asipo
Iwo makuru ekutsiva sarudzo kune anobviswa mazino emeno uye mabhiriji.
Hapana kusakara uye kubvarura pamazino akakomberedza kunokonzerwa
Ivo anesthetically anofadza uye chaiwo echisikigo anotaridzika
Rega murwere adye zvekudya zvakaomarara aine chivimbo
Varwere vanoona kuwedzera mukuzvivimba
Iko hakuna zera rinorambidzwa pakuiswa kwemazino (zvakasiyana nedzimwe sarudzo)
Optismile inoita akanakisa mazino anodyara muCape Town. Vanachiremba vedu vemazino vanonyatsotsanangudza zvisarudzo zviripo kwauri uye nekukurukura mutengo wezvekuisa zino futi.
Iko Kuisa Mazino Kwakakodzera Kwandiri Here?
Mubvunzo wekutanga wauchazoda kubvunza ndewokuti: “Ndiri mukwikwidzi akakodzera here kunorapwa mazino?”
Maitiro akadai sekuchenesa meno anogona dzimwe nguva kuve 'saizi imwe inokodzera zvese', nemazino anodyara kesi yega yega yakasiyana, zvisinei, kazhinji, kuti ive yakakodzera iwe unofanirwa:
Iva nechiyero chakaringana cheyakaonda mapfupa eshaya mushaya yako
Iva wakasununguka kubva pamamiriro anozivikanwa se periodontal chirwere (chinova chimiro chechirwere chemazino)
Iva asiri-wekuputa (iwe uchafanirwa kurega kusvuta panguva yekurapa maitiro padiki padiki)
Dzino Kudzoreredza Sarudzo
Kana zvasvika pakutsiva zino, kazhinji, pane zvitatu zvingasarudzwa:
1) chishandiso chemazino chinobviswa (denture izere kana bvudzi rekubvisa).
2) yakagadziriswa mazino bhiriji (yakaiswa cemented)
3) kuisa mazino.
Kufunga nezve sarudzo yaunosarudza zvinoenderana nezvinhu zvakawanda. Kunyanya, kune mazino anodyara, izvi zvinhu zvinosanganisira:
nzvimbo yezino kana meno asipo,
huwandu uye mhando yeiyo shaya panofanira kuiswa meno,
OptiSmile inoongorora nzvimbo inozotarisirwa kuti ive yemazino uye inoita ongororo yekiriniki yekuti murwere here mukwikwidzi akanaka wezvemazino.
Kudzorera mazino aesthetics
Kudzorera yakarasika mazino basa:
Kugadziriswa kwenzvimbo uye kugadzikana kwepasipo kureva kudzivisa kufamba kwemeno
Kugadzikana uye nyaradzo
Kuchengetedza kwepfupa uye kudzivirira kweasina kusimba / akapera mhasuru mushure mekurasikirwa kwezino
Nei Uchisarudza Mazino Anodyara?
Mazino anodyara ane chihombe chekushongedza, asi pane zvimwe zvikonzero nei iwe ungangoda kufunga izvi senge sarudzo pane mamwe maitiro emazino uye aya anotevera:
Ndicho chinotevera chakanakisa chinhu kune hutano, mazino echisikigo. Yakasimba uye yakagadzikana, kudyara kwemazino kunodzosera zino rakarasika kuitira kuti riite, rinzwe, rinokwana uye rishande sezino rechisikigo. Dzimwe sarudzo dzinogona kutungamira kukuvara kwemapfupa, uye dzinogona kukanganisa kudya, kunyemwerera, kutaura uye zvimwe zviitiko zvehupenyu hwezuva nezuva.
Mazino anodyara igadziriso yenguva refu yakavakirwa kuti igare. Yetsika, mazino anotsigirwa mazino mabhiriji anongogara makore mashanu kusvika manomwe, uye nekuchengetwa kwakaringana kazhinji anopfuura makore gumi, asi pane imwe nguva vangangoda kutsiviwa. Nepo kudyara kwemazino kungangoda kugadziriswa kwenguva nenguva, vanogona kugara kwenguva yakareba kana vakaiswa zvakanaka uye vachengetwa nekufamba kwenguva.
Chengetedza chimiro chako chechisikigo, uye kunyemwerera. Chiso chisina meno chinogona kudzikira uye chioneke chakanyura uye chakasuruvara. Mazino anodyara anokutendera iwe kuti uchengetedze iyo yakasikwa chimiro chechiso chako uye kunyemwerera.
Dzivirira hutano hwakanaka. Kusiya nzvimbo dzisina chinhu mumuromo mako mushure mekurasikirwa rimwe kana anopfuura mazino kunogona kutungamira kune zvimwe zvehutano, sekurasikirwa uye kuora kweimwe yejaya rako. Kana isiri kushandiswa kutsigira zino rechisikigo, rushaya runodzikira, kurasikirwa nesimba uye kusimba.
Mazino anodyara ndiyo yega sarudzo yekudzosa mazino iyo inochengetedza uye inomutsa yakasikwa bone, ichinyatso kubatsira kukurudzira kukura kwemapfupa uye kudzivirira kurasikirwa kwefupa.
Chengeta mazino ako mumuromo mako - kwete mukapu. Mazino anodyara anotendera iwe chengetedza mazino ako kwaanenge ari - mumuromo mako. Uye hauchazonetsekizve kuti mazino ako ekugezesa anogona kutsvedza kana kudonha. Brush, floss uye chengeta mazino akatsiviwa uchishandisa mazino anodyara chaizvo nenzira yaungagona chaiwo mazino - mumuromo mako.
Taura zviri nyore. Kugadziridza kumazino emazino anobviswa kunogona kureva kunetsekana kududza mazwi ezuva nezuva. Hazvina kudaro nemazino anodyara, anoshanda semazino echisikigo.
Idya chikafu chako chaunofarira. Edza uye unakirwe nechikafu chaunoda pasina kuzeza. Unogona kuruma zvakasikwa, kudya chero chinhu chaunoda uye, zvakasiyana nemazino ekubvisa anogona kunetseka, unogona kuona kuravira kwakazara kwechikafu chaunodya nemazino anodyara, futi.
Cavities haigone kuitika mune yekudyara-yakadzoreredzwa korona, kana kutsiva zino; zvisinei, iwe unozofanirwa kushanyira chiremba wako wemazino sezvakarongwa uye nekuchenesa uye kuitarisira uye chako matadza nemuromo mazuva ese, zvakafanana sezvaungaita dai raive zino zino.
Chengeta mazino panzvimbo - chinyararire. Mazino ekugezesa anogona kutsvedza kana iwe uchidya, kutaura, kunyemwerera, kuseka, kutsvoda, kushama kana kukosora, kuitira kuti iwe ugozoisa "panzvimbo" mumuromo. Mazino anodyara akaiswa munzvimbo uye fuse zvakasikwa nejaya rako, zvichireva kuti meno ako ekutsiva haazofambe, tinya kana kuchinja.
Dzivirira mazino ako ane hutano. Kuisa zambuko rinotsigirwa nezino kunoda kukuya mazino kune rimwe kana mativi ese ezino risipo kana mazino - nokudaro zvichikuvadza meno akagwinya kudzorera iwo asipo. Mazino akagadziridzwa ane hutano akasungirirwa, uye nerutsigiro, bhiriji.
Mazino anodyara anoenda mushaya, munzvimbo iyo yako yakashaikwa muzino mudzi, isina kukanganisa mazino ane hutano. Dzinobatsirawo kudzivirira hutano, mazino ari padyo kubva mukuchinja sezvaizoita kana nzvimbo isina chinhu yasara kwenguva yakareba.
Zvinotarisirwa kupfuura dzimwe nzira dzekugadzirisa nekudzoreredza. Mishonga yekuisa mazino ine chinyorwa cheyakavimbika, mhedzisiro-yakareba inobudirira mhedzisiro uye inowanzoonekwa se "inofungidzirwa" kupfuura mamwe marapirwo ekugadzirisa kana kutsiva meno asipo, kusanganisira bhiriji, zvishandiso zvinobviswa uye kudzoka kwekutadza kweiyo midzi canal (endodontic) kurapa.
Mazino anodyara anogona kushandiswa kutsiva rimwe zino, akati wandei mazino, kana ese mazino. Chinangwa chekutsiva kwemazino ndechekudzorera basa pamwe neaesthetics.
Maitiro Ekumisikidza Mazino kuOptismile Cape Town
Munguva yekutanga kubvunza maitiro chiremba wako wemazino weOptiSmile anoongorora mamiriro azino emazino ako kuti aone kana maimendi ndiyo mhinduro yakanakira iwe. Kana zvirizvo, ivo vanoenderera mberi nekutora mifananidzo kana muromo wako uye fomu, kana zvichidikanwa, kuitira kuti Dhijitari yekunyemwerera Dhizaini tekinoroji ishandiswe kukupa iwe zano rekuti marongero ako matsva anotaridzika sei. Iyo CEREC / CAD tekinoroji yavanoshandisa ichave zvakare inobatsira mukugadzirwa kweanodyara kana iwe uchinge wagutsikana zvizere nemabatiro ako matsva akadzorerwa kunyemwerera acharatidzika.
Kugadzirira rushaya rwekuisa
Kuiswa kwemazino kazhinji kunogadzirwa neye titanium sikuru uye korona. Buri diki-dhayamita rinocherwa pasina zino kuitira kutungamira iyo titanium sikuru iyo inobata kuiswa munzvimbo. Kuti udzivise kukuvadza shaya dzakakosha uye zvimiro zveuso senge yakaderera alveolar tsinga iri mushaya shaya.
Mushure mekunge gomba rekutanga mutyairi rakaboorwa munzvimbo yakakodzera yeshaya, inowedzeredzwa zvishoma nezvishoma kubvumira kuiswa kweiyo yekuisa screw. Kana yangove panzvimbo, chingamu chakakomberedza chakachengetedzwa pamusoro pekuisirwa uye chidziviriro chekuvhara chifukidzo chakaiswa pamusoro kubvumidza iyo nzvimbo kupora uye neiyo osseointegration (iyo nzira yekusanganiswa pakati peyakaiswa mazino uye shaya) kuti zviitike.
Mushure memwedzi inosvika mitanhatu yekuporeswa, OptiSmile inozofumura iyo inosimudzwa uye inosungira iyo abutment (chimiro chinobata korona kana kutsiva-senge chinotsiva) kune chinoiswa. Mune zvimwe zviitiko, abutment inogona kusungirirwa panguva yekutanga maitiro. Kana abutment iri panzvimbo, isu tinobva tagadzira yenguva pfupi korona.
Korona yenguva pfupi inoshanda se template yakatenderedza panokura chingamu uye ichizvimisikidza pachayo nenzira yechisikigo. Maitiro aya anobva apedzwa kana korona yenguva pfupi yatsiviwa nekorona yekusingaperi.
Mazino Anodyara Kudzorera
Kuisa mazino kupora kunoenderana nezvinhu zvinoverengeka, chimwe chazvo chiri nzira dzakasiyana dzinodiwa kuti upedze kurapwa kwako. Kuchengetedza kushingairira kwehukama hutsanana hunodiwa kuti uve nechokwadi chakakodzera kusanganisa kwechigadziro uye chimiro chefupa.
Kurapa kubva pakuvhiya kuisa kuiswa kwemeno (s) kunotora kusvika kumwedzi mitanhatu, nepo kukodzera uye kugara kwekorona (s) kunogona kutora kusvika kumwedzi miviri. Asi iyo nguva yakatarwa inoenderana neakasiyana kesi uye kurapwa. Kugadzwa kwekuteedzera kwakakosha kuti utarise kufambira mberi kwako.
Implant Kuvhiya Kutevera-uye Kunze Kuchengeta
Kwemazuva akati wandei mushure mekuvhiyiwa, chikafu chako chinofanirwa kungogumira kuzvikafu zvakapfava. Kana paine zvimisikidzo zviripo, vangangoda kubviswa, zvisinei, zvimisikidza -zvazvipedza izvo zvisingade kubviswa zvinowanzo shandiswa.
Kukundikana kukwesha uye floss ndicho chikonzero chakakonzeresa chekumisikidza kutadza, uye hutachiona hunogona zvakare kuitika kana iyo yekudyara nenzvimbo dzakatenderedza zvisina kucheneswa zvakanaka. Kusvuta kunofungidzirwawo kukundikana kwakanyanya uye kunofanirwa kudzivirirwa uchitevera maitiro ekudyara.
Kuiswa kwemazino kunoita sekutsiva mudzi wezino risipo. Ukuwo, “mudzi wezino rakagadzirwa” unoshanda kubata zino kana zambuko rinotsiva. Kuva neyakaiswa mazino yakasungirirwa pahaya yejaya ndicho chinhu chepedyo kutevedzera zino rechisikigo nekuti rinomira riri roga pasina kukanganisa mazino ari padyo uye rine kugadzikana kukuru. "Osseointegration."
Anodyara uye Dentures
Kune vamwe vanhu, mabhiriji akajairwa uye mazino ekugezesa haangogadzike kana kutokwanisika, nekuda kwenzvimbo dzinorwadza, makoronga akashata kana kumonana. Chinhu chakanakira kudyara ndechekuti hapana mazino ari padhuze anoda kugadzirirwa kana pasi pasi kuti ubate rutsva / mazino ako matsva panzvimbo. Kuti ugamuchire kudyara, iwe unofanirwa kuve nehumhu hwakanaka uye mapfupa akakwana kutsigira kuiswa. Iwe unofanirwa zvakare kuzvipira kuchengetedza zvivakwa izvi zvine hutano. Kuchenjera kwehukama nemuromo uye kugara uchishanyira mazino kwakakosha mukubudirira kwenguva refu kwemazino anodyara.
Akareba Sei Anogadzira Mazino Anosimudza Anopedzisira?
Neyemhando yekutarisira inogara kwenguva refu. Izvi zvinoenderana nenzvimbo yekudyara uye kutevedzera kwemurwere nehutsanana hwemuromo uye kushanya kwemeno. Nekuti mamolars anogamuchira kumwe kunetseka uye kusakara uye kubvaruka, izvi zvinomisikidzwa kazhinji hazvigare sekureba sekumisikidza kuri pamberi pemuromo wako.
Ndezvipi Zvigadzirwa Zvinoshandiswa neOptismile?
KuOptiSmile tinoshandisa endosteal mazino anodyara. Aya anoiswa nenzira yekuvhiya akananga mushaya. Kana chingamu chakapora chapora, kechipiri kuvhiya kunodiwa kuti ubatanidze posvo kune iyo yekutanga kudyara. Chekupedzisira, zino rekugadzira (kana mazino) rinonamirwa kune iyo positi-yega, kana kuiswa mubhiriji kana denture.
Iyo yakawanda kwazvo yemazuva ano implants nhasi ndeye endosteal (kureva akaiswa pamwe alveolar bone) mukugadzirwa.
Endosteal implants yakakamurwa kuita akati wandei akasiyana marudzi anozivikanwa neayo geometry, chimiro, nzvimbo uye basa uye zvigadzirwa:
Cylindrical kana mudzi fomu anodyara
Blade implants uye ramus furemu
Pterygoid kana zygomatic implants
Nakidzwa neupenyu usinganetseke nezvemeno ako. Hapana chikonzero chekunzwa kusanzwisisika paruzhinji, uchinyara nekuti kunyemwerera kwako kunoita kunge kwakasiyana, kana kunetseka kuti meno asipo anokukonesa kunakidzwa nekudyidzana. Hapana chikonzero chekushushikana kuti mazino anobviswa kana mazino anotsigirwa nezino anozosunungura kana kudonha paunotaura, kudya kana kuseka. Mazino akadzoreredzwa nemazino anodyara mazino ayo anokurega iwe utungamire hupenyu hwako uine chivimbo. Bata OptiSmile nhasi ku ita nguva kana kungoziva zvakawanda nezve maitiro.